International Movie Archives - Page6of 8 - YTV
Home » Programs » International Movie » Page 6
?? မေးချင်တာမေးစမ်း အမြဲမှန်အောင်ဖြေနိုင်တဲ့ အိန္ဒိယကဂျမားဆိုတဲ့ ကောင်လေးဆီကို YTV Channel က ပရိသတ်တွေကို ခေါ်ဆောင်သွားပေးချင်ပါတယ်… ?‍? သူရဲ့ ဘဝမှာ ဘာတွေကြုံတွေ့ခဲ့တာလဲ….သူဟာ ဘယ်လိုထူးခြားတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက် ဖြစ်နေမလဲ… ဆိုတာကို ကြည့်ရှုရင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ […]
September 12, 2020 10:03 am
? ချစ်ခြင်းမေတ္တာက အရာရာကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်ပါ့မလား… ?‍❤️‍? ဒီတော့ YTV Channel က ရုပ်ရှင်ချစ် ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက် ထူးထူးခြားခြား စိတ်ကူးယဉ် အချစ်တွေကို ဖော်ဆောင်ကြမယ့် ချစ်သူနှစ်ယောက်အကြောင်းကို “Beautiful Creature” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကနေ […]
ဒီနေ့မှာတော့ YTV Channel ရဲ့ ရုပ်ရှင်ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် ထိတ်လန့်သည်းဖိုဇာတ်ကား ဖြစ်တဲ့ “No Good Deed” နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်….. ?‍? သားအမိနှစ်ယောက်တည်းနေတဲ့ အိမ်ကလေးကို သေနတ်ကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ လူတစ်ဦးရောက်ရှိလာတဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ…? ❓ ပရိသတ်ကြီးဆိုရင်ရော […]
September 11, 2020 12:10 am
သံယောဇဉ်နဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ပြောပြပေးမဲ့ “Dolphin Tale 2” တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်အဖြစ်အပျက်ကို ပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပြီး ဉာဏ်ရည်မြင့် လင်းပိုင်လေးတွေရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုအမှုလေးတွေနဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာခံစားမှုတွေကို ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်………….. ?‍?‍?‍? မိသားစုလိုက်ကြည့်ရှုခံစားရင်း တိရိစ္ဆာန်လေးတွေမှာလည်း သံယောဇဉ်ရှိတယ်ဆိုတာ ကို […]
September 9, 2020 7:07 am
ဂိုဏ်းတစ်ဂိုဏ်းနဲ့ တစ်ဂိုဏ်းအကြား ပြဿနာတွေက ဘယ်လောက်အထိ ဆိုးရွားတတ်လဲ…ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ လူဆိုးဂိုဏ်းတွေကြားမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ပြဿနာမျိုးတွေ ဆိုတာထက် ကျော်လွန်နေခဲ့တဲ့ အရှုပ်အထွေးတွေနဲ့ ပြဿနာတွေကြားက ပြန်လည် ရှင်သန်ခဲ့ကြတာကို ဖြေရှင်းကြတာတွေအပြင် ပြဿနာတွေအနေနဲ့ ပိုမိုပြင်းထန် လာတော့မှာပါ….တွေကို ဖြေရှင်းကြမယ့် […]
မုန်းနေဦးမလား…ဒါမှမဟုတ် မေတ္တာတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ကြမလား.ဒီနေ့ ဇာတ်ကားလေးကတော့ ပရိသတ်တွေကို အမုန်းကနေ အချစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ သူနှစ်ယောက်အကြောင်းကို ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်……….. ❓ လူသတ်မှုတစ်ခုရဲ့ လူသတ်သမားရှာဖွေရေးမှာ သက်သေဖြစ်နေတဲ့ Paul နဲ့ Meryl တို့နှစ်ယောက်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ အတွက် […]